Kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich oo ku dagaallamaya saxiixa xiddig ka tirsan Chelsea… (Waa kee?) – Gool FM
Haaruun January 15, 2022
(London) 15 Jan 2021. Kooxaha Barcelona iyo Bayern Muich ayaa la soo warinayaa inay labaduba si xoog leh u xiiseynayaan saxiixa daafaca dhexe ee naadiga Chelsea, Andreas Christensen, kaasoo ay doonayaan inay beeca xorta ah ku qaataan.
25-sano jirkaan ayaa xiddig muhiim ah u ahaa Blues intii lagu gda jiray xilli ciyaareedkii the 2021-22, waxaana uu saftay 21 kulan tartammada oo dhan, laakiin heshiiskiisa garoonka Stamford Bridge ayaa ku eg dhammaadka bisha June.
Kooxda Tababare Thomas Tuchel ayaan weli wax heshiis kordhin cusub ah la gaareen xiddiga xulka qaranka Denmark, waxaana sida uu sheegay Suxufiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano, inay saxiixiisa ku tartamayaan Kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich.
Romano ayaa ku andacoonaya in soo jeedinta Chelsea ee ah heshiis kordhinta ay wali miiska u saaran tahay, laakiin ma jiraan wax horumar ah oo ku saabsan qandaraas suurtogal ah oo la la galo kooxda heysata Koobka Horyaalladda Yurub.
Christensen, kaasoo labo xilli ciyaareed oo amaah ah ku soo qaatay kooxda Borussia Monchengladbach intii u dhexeysay 2015 illaa 2017 ayaa horumar fiican sameeyey, waxaana uu u saftay Blues 148 kulan tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay sanadkii 2013.
Go’aanka kama dambaysta ah ee Mustaqbalka xiddigan reer Denmark ayaa la filayaa in si dhakhso ah loo gaaro, iyadoo labada Kooxood ee Barcelona iyo Bayern Munich ay xor u yihiin inay bishaan heshiis horudhac ah la gaaraan daafacan.
Kaddib Cameroon xulkii labaad oo iska xaadiriyey wareegga 16-ka Koobka qarammada qaaradda Afrika